🇲🇲 (၇၅) ကြိမ်မြောက် ပြည်ထောင်နေ့ 🇲🇲 ယနေ့ ကျရောက်သည့် (၇၅) ကြိမ်မြောက် ပြည်ထောင်နေ့အား FOCUS Beauty မိသားစုမှ ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုပါသည်။
February ဆို မျက်စိထဲ အရင်ဆုံးပြေးမြင်တာက FOCUS Beauty ရွှေပြားလေးတွေပါ 💛 ဒီ လ February မှာ Year End Bonus 2021 ပိတ်တော့မှာနော် လစဉ်တိုင်း ကိုယ့်ရဲ့ အရောင်းတွေကို သေချာမှတ်ထားကြရဲ့လား ❓ ကိုယ့်ရဲ့ Target တွေရော ပြည့်နေကြပြီလား❓ စာရင်းလဲ သေချာတွက်မယ် Target တွေပြည့်နေပြီဆို Triple Bonus ရဖို့ သေချာနေပြီပေါ့ 🥰 😱 ဟင် Triple Bonus ဆိုတာ ဘာလဲ ❗️ February မှာ … ၁။ February Monthly Bonus ၂။3Monthly Bonus ၃။ Year End Bonus 2021 တွေလဲ ရမှာဆိုတော့ Triple Bonus ပေါ့.. 💰ရွှေတွေရော ငွေတွေရော ရမှာဆိုတော့ ပျော်စရာတွေရော ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီလေ February တစ်လလုံး အချိန်ရသေးလို့ Target ဖြည့်ပြီး ကြိုးစားပြီး ခမ်းနားစွာ ကျင်းပမဲ့ ဆုပေးပွဲကြီးမှာ ဆုံကြရအောင်နော်
? ချစ်ခင်သော FOCUS Beauty Agent များရှင့် ? FOCUS Beauty ရဲ့ Application ကို Agent များ အသုံးပြုမှု ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက် Maintenance ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သောကြောင့် ၂၁.၁.၂၀၂၂ (သောကြာနေ့) နေ့လည် (၁) နာရီမှ စတင်ပြီး FOCUS Beauty App အားအသုံးပြု၍ မရကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါတယ်ရှင် ၂၂.၁.၂၀၂၂ (စနေနေ့) တွင် ပုံမှန် ပြန်လည် အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Agent များ အဆင်မပြေမှု တစုံတရာ ဖြစ်သွားပါက အနူးညွှတ်တောင်းပန်အပ်ပါတယ်ရှင် ?